How to getaHome Loan in Myanmar | Interest Rates - New Home Realty
You are here: Home / Home Loan Interest rate in Myanmar
Home Loan Interest rate in Myanmar
နှစ်ရှည်အိမ်ရာ​ချေး​ငွေ @ Home loan တွက်ချက် ပုံ
ယခုလို Stay at home နဲ့ Work from home ကာလမှာ အိမ် ဝယ်ချင်သူများအ​​​နေဖြင့် ဘာလို့ဝယ်သင့်လည်း။ ဘယ်လိုအ​​​ခြေအ​နေမျိုးဆို ဝယ်ဖို့ မသင့်​သေးဘူးလည်း ဆိုတာကို အဓိကထားရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကရှင်းပြ​ပေးမယ့် အပိုင်း​က ​တော့ ၃ပိုင်းရှိပါတယ်။
​ချေး​ငွေတွက်ချက်ပုံ နှင့် ​ချေး​ငွေရရန် လိုအပ်ချက်များ
အပိုကျသင့်မည့် ဝန်​ဆောင်ခများနဲ့ အာမခံ ခများ
အိမ်ရာ​ချေး​ငွေ၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များ
အဓိက က​တော့ ဘဏ်​တွေမှ​ကောက်တဲ့ အတိုးနှုန်းထား​ပါ။ ​လော​လောဆည် Covid-19 ကာလမှာ ဘဏ်​တွေက အတိုးနှုန်းက တစ်နှစ်ကို ၁၀တိုး ၈ကျပ်တိုး စသည်ဖြင့် ​ငွေ​ပေး​ချေမယ့် ပမာဏ ​ပေါ်မူတည် ပြီး သက်မှတ်ထားပါတယ်။
ဥပမာ အ​နေနဲ့တွက်ပြရမယ်ဆိုရင် ဝယ်သူလက်ထဲမှာ သိန်း ၁၀၀ ရှိတယ် ​ဆိုပါစို့။ ဘယ်​​​လောက်တန် တိုက်ခန်းမျိုး ရှာလို့ရမလည်းဆိုတာ တွက်ပြပါမယ်။
၁.၁။ သိန်း ၃၃၀ တန် တိုက်ခန်း ဝယ်မယ်ဆို ကနဦး​ငွေ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ၉၉သိန်း ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦး တန်ဖိုး ၃၀ရာခိုင်နှုန်း ​ဆို တစ်နှစ် အတိုး ၁၀ကျပ် နဲ့ ၁၅နှစ် ​ပေး​ချေမယ်ဆို ​အောက်ပါအတိုင်းကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Down Payment ၃၀%…………. ၉၉သိန်း
ဘဏ်မှ ​ချေးယူ​ငွေ………………… ၂၃၁သိန်း
တစ်နှစ် အတိုးနှုန်း………………… ၁၀ရာခိုင်နှုန်း
​ပေး​ချေရမည့်ကာလ…………….. ၁၅နှစ် အထိ
တစ်လလျှင် ဘဏ်သို့​ပေးသွင်းရမည့်​ငွေ …. ၂၄၀,၀၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင် ခန့်ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦး ​ပေးသွင်း​ငွေ ၃၀ရာခိုင်နှုန်း…..၉၉သိန်း
ဝယ်ယူမည့်သူနှင့် ​ထောက်ခံမည့်သူ သည် ၁၈နှစ် မှ ၅၅နှစ်ကြား ဖြစ်ရပါမည်။
ရပ်ကွက် ​ထောက်ခံစာ ရဲစခန်း ​ထောက်ခံစာ တို့လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ဝယ်ယူမည့်သူနှင့် ​ထောက်ခံမည့်သူ၏ လစဥ်ဝင်​ငွေ အနည်းဆုံး ၅သိန်းခွဲခန့် ရှိရပါမည်။
လခစားဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ဝယ်ယူမည့်သူ၏တစ်ဦးတည်းလစာ သို့မဟုတ် ​ထောက်ခံမည့်သူ နှင့် နှစ်ဦး​ပေါင်းလစာ သည် ၅သိန်းခွဲ ​ကျော်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိကုမ္ပဏီမှ လစာ ​ထောက်ခံစာ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အတွက် က​တော့ လုပ်ငန်းလိုက်စင် နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အချက်အလက်များ, ဝင်​ငွေခွန်မှတ်တမ်း နှင့် ​ငွေကြေးရှင်းတမ်းများ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Oversea worker များနှင့် Seamen(သင်္ဘောသား)များအတွက်က​တော့ Passport, ​CDC, ဘဏ်သို့ ​​လစာငွေလွဲမှတ်တမ်း ၆လစာ၊​နောက်ဆုံး Contract နှင့် ရှိပါက လက်ရှိ Contract(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ မှ Recommendation letter လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်​ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ​လျောက်လွှာတင်ပြီး ​ချေး​ငွေကျချိန်သည် ခန့်မှန်း ၄၅ရက် မှ ၂လ အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။
၂။ အပိုထပ်​ဆောင်း ကျသင့်​​​ငွေ
မိမိ​လျှောက်ထား​သော ဘဏ်အ​ပေါ်မူတည်၍ ​ချေး​ငွေ၏ ၁.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်) ၂ရာခိုင်နှုန်း ​ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။
မီးအာမခံ ​ကြေး ၁နှစ်စာ ​ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
၃.၁။ လက်ရှိအတိုးနှုန်း က ၁၀ရာခိုင်နှုန်းသက်မှတ်ထားသဖြင့် အရင်က ၁၃ကျပ်မှ ၃ကျပ် အထိ​လျော့ထားပါတယ်။
၃.၂။ အတိုးနှုန်းက တစ်နှစ် ၁၀ရာခိုင်နှုန်း နှင့် တလလျှင် ၈၃ပြားခန့် ဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိဘဏ်မှာကျင့်သုံး​နေတယ့် အတိုးရင်း​ပေါင်း Amortization ​ပေး​ချေမှု့ပုံစံ​ကြောင့် တကယ့်ကျသင့်တိုးက တလ ၅၆ပြား နှင့် တစ်နှစ်လျှင် ၆ကျပ်ပြား၇၀ခန့်သာ ကျသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။၃၃၀သိန်းအတွက် ​ချေး​ငွေ ၂၃၁သိန်းအတွက် အတိုးက ၁၅နှစ် ကို ၂၁၅သိန်းခန့်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၁၅သိန်းကို အတွက် တစ်နှစ်ကို ၁၄သိန်း ၃​သောင်း ခန့်နဲ့ တစ်လကို ၁သိန်း၂​သောင်းသာကျသင့်ပါသည်။
ထို့​ကြောင့် ​ငွေသိန်း ၂၃၁သိန်း ​ချေး​ငွေ အတွက် အတိုးက တစ်လလျှင် ၁သိန်းနှစ်​သောင်း သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သိန်း ၃၃၀ တန် အခန်းဝယ်ယူပါက အတိုးပါဝင်ပြီးကို ၂၄၀,၀၀၀ ကျပ်ခန့်သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃.၂။ အိမ်ရာ​ချေး​ငွေ၏ သတိထားရမည့် အချက်များ
အဓိက သတိပြုသင့်တာက​တော့ အိမ်ရာ​ချေး​ငွေ ဟာ နှစ်ရှည် ​ငွေ​ပေး​ချေမှု ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိနှင့် မိမိ မိသားစု အတွက် ၁၅နှစ်စာ ​​ငွေ​ပေး​ခြေနိုင်ဖို့ အတွက် စိတ်​ရော ကိုယ်ပါပြင်ဆင် ထားဖို့လိုပါတယ်။ ​စိစိစစ်စစ် သုံးခြင်း၊ ပုံမှန်လစဥ်​ပေးသွင်း​ငွေ နှင့် မိသားစု ကအသုံးစရိတ်အပြင် ​​ငွေပို​ငွေလျှံစု​ဆောင်းထားခြင်းက မိမိ အတွက် ​ရေရှည်မှာ အကျိုးရှိ​စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်သင့်တာက​တော့ အိမ်ယာ​ချေး​ငွေ​ သည် ဝင်​ငွေ၏ ၃ပုံ ၁ပုံ သာဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၂၅၀,၀၀၀ကျပ် လတိုင်း​ပေးသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝင်​ငွေ အနည်းဆုံး ၇၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပါက သက်​တောင့်သက်သာ နဲ့ အိမ်ယာ​ချေး​ငွေကို ​ပေး​ခြေနိုင်ပြီ အိမ်တစ်လုံး ကိုယ်ပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။